Anyị na-anwale nke ọma Doogee DG280 LEO | Gam akporosis
Taa, achọrọ m igosi gị njirimara teknụzụ niile yana iji ngwa na egwuregwu nke njedebe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ndị China. Doogee nke na-adịbeghị anya a na-ekwu maka ya nke ukwuu maka imepụta ọnụ na ụfọdụ nkọwa nkọwapụta dị oke ọnụ ahịa karịa ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.
Aha nke ọnụ na-aza nomenclature nke Doogee DG280 ma obu amara aha otutu Doogee leo, ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke anyị nwere ike ịgụnye n'ime gam akporo n'etiti, ọ bụ ezie na ọnụahịa mkpọsa nke ga-adị n'ime obere gam akporo. Ọnụahịa ọhaneze nke anyị ga-enwe ike inweta ihe dị ka Euro 80 ugbu a n'ụlọ anyị.
1 Nka na ụzụ nkọwa nke Doogee DG280 «LEO»
2 Isi ihe nke Doogee DG280 LEO
3 Ihe na-adịghị m mma banyere nke a Doogee DG280 LEO
Nka na ụzụ nkọwa nke Doogee DG280 «LEO»
Ihuenyo 4'5 "IPS nwere mkpebi x pixel 450 x 854
Nhazi Mediatek MT6582 QuadCore na 1 Ghz
GPU Mali 400 Mp2 isi abuo na 5oo Mhz
Nchekwa ime 8 Gb ịgbasa site na MicroSD ruo 32 GB
Rear igwefoto 5'04 Megapixels nwere ọkụ LED arụnyere
Igwe n'ihu 1 Megapixels
Njikọ Bluetooth 4.0 - WiFi - GPS na A-GPS - netwọk 2G na 3G
Batrị Mbughari 1800 mAh Li-ion
Ahịa Gwọ ọnụahịa euro 80 gụnyere
Isi ihe nke Doogee DG280 LEO
N'etiti okwu m ga-achọ igosipụta Doogee DG280 LEO, ọnụ na m nwere ike ikwu na ọnụahịa ya yana maka ndị ọrụ gam akporo ma ọ bụ ndị ọrụ na-eji ọnụ gam akporo ha maka ihe ndị kachasị mkpa anyị nwere ike iche n'echiche, nke a na-ejikọkarị ma gwa gị ihe niile na-eme na netwọkụ mmekọrịta anyị, na-egwu ụfọdụ egwuregwu gam akporo ndị ọzọ, zipu ma nata WhatsApp, Telegram, Line ma ọ bụ ihe ọ bụla kachasị amasị gị ngwa ngwa, were foto n'èzí, lelee akaụntụ email anyị, gee egwu kachasị amasị anyị ma ọ bụ ọbụlagodi lee usoro ihe nkiri anyị kachasị amasị anyị na nkasi obi nke komputa gam akporo a nyere naanị 4,5 ″ IPS ihuenyo nke bụ ihe kachasị mma maka njedebe ahụ dum yana ogo ya dị elu.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike ịkọwapụta ọrụ agbakwunyere ya nke na-enye anyị ohere nke soro ndị mmadụ na-emekọrịta ihe site na mmegharị ahụ na ihuenyo mkpọchi ọnụ. Ya mere, anyị nwere ike ịmeghe ọnụ site na mmetụ aka abụọ ejikọtara dị ka ọkọlọtọ na ntọala, ma ọ bụ na anyị nwere ike ịnweta ozugbo, na-enweghị ọbụna ịkpọghe ọnụ, ngwa anyị kachasị amasị ma ọ bụ nke a kacha eji dị ka Dialer nke gam akporo anyị, ihe nchọgharị ahụ, ngwa ozi ma ọ bụ igwefoto anyị Doogee DG280.
Akụkụ ọzọ m ga-achọ ito banyere nke a Doogee DG280 LEO, na anyị chetara na anyị nwere ike nweta ole na ole 80 Euro tinye na adreesị anyịỌ bụ àgwà nke ihe eji eme ihe maka owuwu ọkụ a na ama aka ebe ha dị, ihe ndị, ọ bụ ezie na ha bụ plastik, na-enye ya aka nke kachasị adị. Tumadi ka a mata ya micro-perforated azụ shei akpan iji agbasa okpomọkụ na banye obere tụlee ruo 1,20 mita elu.
Ihe na-adịghị m mma banyere nke a Doogee DG280 LEO
Otu n'ime akụkụ m ga-akatọ nke a Doogee DG280 LEO, isi ha niile bụ usoro nkebi ejiri ma ọ bụ fọdụ maka ịwụnye ngwa na egwuregwu, nkebi nke Ha hapụrụ naanị 1,44 Gb maka ịwụnye egwuregwu na ngwa. Obere ego anyi ga manye iji ngwa nke ndị ọzọ ịkwaga data buru ibu nke ngwa ndị a arụnyere na ebe nchekwa dị na mpụga ma ọ bụ MicroSD.
Isiokwu ọzọ m ga-achọ imetụ aka bụ àgwà igwefoto nke Doogee DG280, ọnụ ya na 5.04 megapixel igwefoto nwere ike ịdị mma n'ọnọdụ ọkụ, iji were foto dị egwu yana nke kariri mma ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ndị ọnụ na otu ọnụahịa. Agbanyeghị na ihe na - akawanye njọ ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ijide n’ime ụlọ na ọkụ dị ala ma ọ bụ na foto abalị.
Imecha gwa ha nke ahụ ọnụ ya bara uru nke ọma maka ndị ọrụ ahụ niile na-achọ ọnụahịa dị ala na ọnụahịa nke ihe na-erughị 100 euro. Ọnụ nke nwere ihe eji eme ụmụaka na ihe eji eme ihe nke njirimara ya na-etinye ya otu n'ime ọnụ ahịa kachasị mma na ọnụahịa ọnụahịa nke na-agagharị, ebe ọ bụ na dịka m na-agwa gị na Doogee DG280 a, anyị nwere gam akporo n'etiti etiti gam akporo na ọnụahịa ala dị ala.
Ugbu a i nwere ike zụta Doogee DG280 LEO naanị maka 75,25 Euro .
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » [Video] Doogee DG280 Leo nyochaa, n'etiti igwe gam akporo maka ihe na-erughị 80 euro
Na mmelite ??? Achọghị m ịnwe ekwentị enweghị akara, mana m na-eche na a ga-emelite usoro a maka opekata mpe afọ 1-2.
Nanị ụlọ na-emesi gị obi ike maka mmelite ndị ọrụ maka afọ ole na ole na njedebe nke ọnụahịa a bụ Motorola na Moto E. Thelọ ọrụ ndị ọzọ na-emepụta, aha ndị dị ka Samsung, Lg, Sony, HTC na ndị ọzọ, ị gaghị ahụ ala- na etiti ọnụahịa ị nwetara na ndụ gị nkwalite ọrụ na nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo.
na ekwentị a, ị tụlere na ọ na-ama LG, Samsung, wdg aka. (Na oke ya n'ezie!) Kemgbe m na-enyocha ọnụahịa (na Mexico) ma ndị a enweghị ebe nchekwa 1GB, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile bụ 512 MB na ndị nhazi ya bụ 1GHZ na ekwentị a bụ QuadCore 1.3GHZ, nke emelitere OS kwa!
You nwere ike ịkwado ekwentị a na-enweghị ịdaba na ọkwa ekwentị China na obere oge batrị anaghị ejere ha ozi, mkpebi ahụ adịghị mma, wdg.
Daalụ na ekele…
Dị ka m na-ekwu na vidiyo vidiyo, ọ bụ ọnụahịa a tụrụ aro nke ukwuu nke enweghị ihe jikọrọ ya na ụdị ndị China amachaghị, Ọzọkwa site na ụlọ ahịa ọ bụla n'ịntanetị, ị ga-enwe ike ịzụta akụkụ ndị ọzọ dị ka batrị na ọnụ ahịa jọgburu onwe ya. Dịka ọmụmaatụ batrị maka Doogee DG280 LEO na-akwụ ụgwọ 4,99 Euro
N’enweghị mgbagha, ọnụ ahịa akwadoro nke ọma n’ihe metụtara ogo / ọnụahịa.
o nwere igwe onyonyo, o nwere mhl?
Na gam akporo ọ dịghị mkpa iji wụnye ngwa ọ bụla, iji wụnye mmemme na micro SD, ị na-aga ngwa na enwere nhọrọ ịmegharị ihe niile na kaadị ma ọ bụ usoro nchekwa.
Zaghachi ka enriquekohnen
Kedu ka ị mere? Enweghị m ike ijikọ na ịntanetị site na mgbawa, ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na ị kọwaara m ya, ebe ọ bụ na m na-agbalị ụbọchị abụọ ugbu a, daalụ, ọ bụ maka doogge 280
Zaghachi quiroga jorge
Enwere m mkpanaka m gụrụ DG280. Ọ bụ nnọọ ike mobile. Anọ m atụnyere ya Samsung g355m nke nwanne m nwoke zụtara, ọ bụ ezie na Samsung dị mma, Doogee doro anya ngwa ngwa (ọ nwere elekere 1.3 megide 1.2 nke Samsung na 1 GB nke ebe nchekwa megide ihe megabytes Samsung 750 mana m chere na na arụmọrụ ka elu nke Doogee azaghị naanị nke ahụ). Speak na-ekwu okwu banyere ekwentị a dị ka ihe kwesịrị ekwesị maka onye chọrọ ihe dị mkpa ... enweghị m ike iche ihe ị dabere na ya. Ekwentị a bụ maka ndị chọrọ uru kachasị elu. A na-enye arụmọrụ site na ụdị nke ị wụnyela gam akporo na ekwentị mkpanaaka nwere 4.4. Ngwaọrụ niile na-arụ ọrụ zuru oke ma ọ nweghị ebe ọ dabara n'okpuru Samsung. Enwere m obi abụọ na enwere ekwentị nke taa nwere uru ndị a, anaghị m ekwu maka ala dị ala ma ọ bụ ọkara, m na-ekwu maka ọkwa kachasị elu nke dị ugbu a. Ọ bụrụ na ihe anyị na-atụnyere bụ IPhone ma ọ bụ Nokia, ntụnyere ahụ na-adịkarị mgbagwoju anya ebe ahụ n'ihi na anyị nwere sistemụ arụmọrụ dị iche iche, na nke a, naanị ịsị na ekwentị nwere sel sistemụ nwere ike ịkwaga na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ n'efu, nke m na-eme echeghi nke a na-ezighi ezi a na-akpọ elu-ọgwụgwụ. The elu ọgwụgwụ, ọ bụ naanị elu ahịa. Taa, ahụghị m na ha nwere nnukwu elele.
ezigbo abalị, azụrụ m ọdụ a, mana taa mgbe m na-achọ ịse foto, igwefoto n'ihu pụtara n'ihu m, enweghị m ike ịhọrọ nhọrọ ịgbanwee n'azụ. You nwere ike inyere m aka?
Nnọọ. Enweghị m ike ịme mgbawa were akara ịntanetị. M bi na Argentina. ị nwere ike ị nyere m aka?
Mkpịsị aka na-eri nri abalị nri ngwa nri; Taa, isi nri Ezi ntụziaka
Ugbu a na gam akporo free RPG One Piece Treasure Cruise based on the manga by Eiichiro Oda